“Waa ku baryaa xitaa markaad gaarto 200 oo sano haka fariisan ciyaaraha.”. Wiil yar oo baroorta iyo DIIFKA isku daray kaddib markii uu Messi sheegay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga+MUUQAAL – Gool FM
(America) 28 Juunyo 2016. Taageerayaasha xulka Argentina ayaa halkii ay ka caroon lahaayeen go’aankii aan laga fiirsan uu ka dhawaajiyay Lionel Messi kaddib guul daradii uu kala kulmay xulka Chile ee Finalka Copa America ayayba ka sii qaadeen muxubo iyo kal gaceyl ka badan kii hore oo waxaa la arkayay iyagoo bannaanka u dhooban kuna heesaya waa ku baryeynaa hana tagin.
Lionel Messi ayaa xulkiisa keenay saddex Final oo xiriir ah labo jeer Copa America iyo hal jeer koobka adduunka, laakiin midkood ma uusan ku guuleysan taa oo keentay inuu qaato go’aan ah inuu isaga fariisto ciyaaraha caalamiga ah.
Wiilka madaxwayne ku xigeenka San Lorenzo ee dalka Argentina, Marcelo Tinelli ayaa sheekadan sii waalay kaddib markii ay hooyadii ka soo duubtay muuqaal isagoo ooynaya Diifkuna ka daadanayo.
Wiilka ayaa hadalada uu ku barooranayo waxaa ka mid ahaa: “Ha bixin, maxaa yeelay la’aantaa ma guuleysan karno.
“Adigaa ugu fiican adduunka, weligaa haka fariisan ciyaaraha xitaa marka aad 200-sano jir tahay, fadlan joog Messi. Ma doonayo inaad tagto, dhammaanteen qalad wuu naga dhacaa.”.
Halkaan guji si aad u daawato cunuga u ooyay Messi
HABEEN BIDAAR KUGU GASHAY WAA HABAAR!! Weyne Rooney oo ay xalay tintii ka durugtay+SAWIRO